Izixhobo zokuhlamba iimpahla zifuna indleko
Utyalo-mali ococekileyo ococekileyo, ubuninzi bendawo kwindawo enkulu, izixhobo zokuhlamba iimpahla ngoku zingakanani imali? Makhe sivule ingcaciso ecacileyo yengcali ngaphakathi kwenkqubo yokufunda kule ngongoma.
Ukususela kumbono wenkqubo yotyalo-mali yokucoca iimarike ezomileyo, kufuneka kuqala kuqala ukucacisa izixhobo, kodwa iqulethe umsebenzi weefowuni kunye nabakhiqizi abakhethwe ngokuchanekileyo, okukhawuleza ukwenzela ukuba ngcono umgangatho wenkonzo.
Ngoko ukuba utyalo-mali, ingakanani imali yokuhlamba impahla? Khangela imfuno yecandelo elincinci lokuhlamba kunye neenkulungwane zeendleko. Ukongezelela, kuya kubakho ixhobo zokusebenza ezihlambulukileyo zokuhlamba impahla, ixabiso alilona, ​​imfuneko ethile yokubona amandla okuhlamba kunye nokuqulunqwa komsebenzi, ngoko ukuthenga izixhobo kufuneka ubone i-market.
Ungathengisa njani iimpahla zokucoca ezomileyo ezizinzileyo? Uhlalutyo ngabathengisi ngaba kunjalo, ingcali phakathi kwenkqubo yokufunda iveza ukuba abavelisi ngokubanzi basondele ngakumbi kwiindleko zemveliso, intengo kwaye ngokwemigangatho yemigangatho kunye nasemva kokuthengiswa kucacile, ngoko ke amalungelo ethu abathengi kunye Inzala yolondolozo inenzuzo kakhulu.
Nangona kunjalo, izixhobo zokucoca ezinomileyo ezilungileyo? ENEJEAN izixhobo zokuhlamba okunene zilungile, unganokubonisana ukuyiqonda. Kwakhona, izixhobo zokuhlamba iimpahla, kufuneka zingabi zikhohlisi ezingaqhelekanga zeentengiso zeemveliso, zicebise iingcebiso ezininzi zeengcali, ukuze sikwazi ukukhusela iimfuno zokulahleka kwethu.
Inqaku lokugqibela: Indlela yokuvula i-clean clean...
Inqaku elilandelayo: Ukuthenga izixhobo zokuhlamba ...